RAHARAHA FANDRATRANA MPISOLOVAVA :: Naiditra am-ponja vonjimaika izy mirahalahy zanaka jeneraly • AoRaha
RAHARAHA FANDRATRANA MPISOLOVAVA Naiditra am-ponja vonjimaika izy mirahalahy zanaka jeneraly
Nilatsaka ny didy avy amin’ny Fampanoavana, momba ilay raharaha herisetra nihatra tamina mpisolovava, tamin’ny sabotsy maraina lasa teo, tetsy Antanimena. Naiditra am-ponja eny Antanimora ireo mpirahalahy, zanaka manamboninahitra iray tompon’ andraikitra ambony teo aloha momba ny fiarovana eny amin’ny Fiadidiana ny Praiminisitra.
Tsy tonga teny amin’ ny lapan’ny Fitsarana Anosy kosa ny lehilahy fahatelo isan’ireo voampanga. Hamoahan’ny Fitsarana taratasy fikarohana amin’io raharaha io izy.
Mafonjafonja ihany ny vesatra anenjehana azy mirahalahy izay niatrika ny Fampanoavana nandritra ora maromaro tetsy Anosy, omaly. « Vono niniana natao sy fanimbana fananan’ olona ary fampitahorana tamina basy no fitoriana mitambesatra amin’ireto lehilahy nikasi-tanana mpisolovava ireto. Nilaza ho nitory azy telo lahy ihany koa ny lehilahy iray hafa, amin’ny maha vavolombelona azy tamin’ io raharaha io », hoy ny zandary nisahana ny fanadihadiana.
Tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro no nanomboka noraisin’ny mpitsara teo anivon’ny Fampanoavana ny raharaha, omaly. Ny tolakandro vao nivoaka ny didy famonjana vonjimaika. Araka ny nambaran’ny loharanom-baovao akaiky ny famotorana dia nametraka fitoriana ihany koa ireto mpirahalahy zanaka jeneraly ireto.
Miandry famotorana hafa
Raha ny fanampim-panazavana avy amin’ny zandary dia « nitory an’ilay mpisolovava iretsy voarohirohy noho ny hoe fikasana famonoana azy ireo ». « Heno tamin’ny fakàna am-bavany fa saika nodonin’ilay mpisolovava tamin’ny fiarany izy mirahalahy, tamin’iny sabotsy iny. Andrasana ny toromarika avy amin’ny Fampanovana, dia hanokatra fanadihadiana momba izay ihany koa ny mpanao famotorana » , hoy ihany ny mpitandro filaminana.
Tsiahivina fa nahoraka tamin’ny tambajotran-tserasera Facebook, nanomboka ny marainan’ny sabotsy lasa teo, ity raharaha ity. Telo lahy mitangorona amin’ny lehilahy roa, ny iray mihohoka ary ny faharoa mandohalika, no hita tamin’ny fiandohan’izany horonantsary izany. Niparitaka ny vaovao, indrindra ny fisian’ny hambana basy sy daroka, nandritra izany tranga herisetra nalaza be tetsy Antanimena izany.
Izao niafara tamin’ny fiakarana teny amin’ny Fampanoavana izao ny raharaha. Andrasana ny fotoam-pitsarana.
FIPARITAHANA FITAOVAM-PIADIANA :: Miaramila telo voarohirohy amin’ny fahatrarana bala an-jatony